မြန်မာ-ဂျပန်-အမေရိကန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖိုရမ် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် တက်ရောက် - Yangon Media Group
မြန်မာ-ဂျပန်-အမေရိကန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖိုရမ် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် တက်ရောက်
ရန်ကုန်၊ ဩဂုတ် ၂၀- မြန်မာ-ဂျပန်-အမေရိကန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖိုရမ်ကိုနိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်၍ ဂျပန်၊ အမေရိကန် လုပ်ငန်းရှင်များကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ဖိတ်ခေါ်မှုပြုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာ-ဂျပန်-အမေရိကန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖိုရမ် (Myanmar-Japan-US Forum on Fostering Responsible Investment Seminar) ကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင် ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန် ကြီးဌာန၊ ဂျပန်သံရုံး (ရန်ကုန်)၊ အမေရိကန်သံရုံး (ရန်ကုန်)တို့မှ ကြီးမှူး၍ ကုန်သည်စက်မှုအသင်း ချုပ်(UMFCCI)၊ ဂျပန်ကုန်သည် စက်မှုအသင်း၊ အမေရိကန်ကုန် သည်စက်မှုအသင်းနှင့် JICA တို့ မှပူးပေါင်းကာ ဩဂုတ် ၂၀ ရက် က ရန်ကုန်မြို့ရှိ Novotel Yangon Max Hotel ၌ ကျင်းပပြု လုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြား စီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးအောင် နိုင်ဦးက ]]ဒီပွဲကျင်းပတဲ့ရည်ရွယ် ချက်က မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိ တဲ့ဂျပန်လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ အမေရိကန် လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ မြန်မာလုပ်ငန်း ရှင်တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး အခွင့်အလမ်းတွေ ဘယ်လိုပူးပေါင်း ရှာဖွေနိုင်မလဲ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တွေဘယ်လို တိုးချဲ့နိုင်မလဲ၊ ဘယ် လိုမြှင့်တင်နိုင်မလဲ၊ အဲဒီအတွက် လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ မျှော်မှန်း ချက်က အဓိကမဟုတ်ဘူး။ အဓိ က ဘယ်ကဏ္ဍတွေမှာ ပါဝင်နိုင် ကြမလဲ။ ဘာတွေအခွင့်အလမ်းရှိ မလဲဆိုတာတွေကို ဆက်ဆွေးနွေး သွားဖို့ရှိပါတယ်။ နောက်ပြီးတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ပူးပေါင်း လုပ်ကိုင်နိုင်မယ့် နယ်ပယ်တွေကို ချဲ့ထွင်မယ် ” ဟု ယင်းဖိုရမ်တွင် မီဒီယာများကိုပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ရေရှည်တည် တံ့ခိုင်မြဲပြီးဟန်ချက်ညီသောဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုစီမံကိန်းနှင့်မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း တို့အရ မြန်မာနိုင်ငံ၏ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု အလားအလာကောင်း များအား သိရှိနိုင်ရန်၊ တာဝန်ယူ မှုရှိသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဖိတ် ခေါ်ရန်ရည်ရွယ်၍ အဆိုပါဖိုရမ် ကို ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး တာ ဝန်ယူမှုရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဖြစ်လာစေရေးအတွက်
“ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုများ တိုးမြှင့်လုပ်ကိုင်ရာ တွင် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ အဓိကကြုံ တွေ့နေရသည့် စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ယင်းစိန်ခေါ်မှုများ အတွက် မြန်မာ- ဂျပန်-အမေရိကန် သုံးနိုင်ငံပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်မှု “၊ ]]ပြည်တွင်း ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ အခန်း ကဏ္ဍနှင့် မြန်မာ့ဈေးကွက်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်ရန် ကြုံ တွေ့နေရသည့် ယင်းတို့၏ စိန် ခေါ်မှုများ}} ခေါင်းစဉ်များဖြင့် စကားဝိုင်းဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
ဦးအောင်နိုင်ဦးက ]]မြန်မာ ပြည်ကိုစိတ်ဝင်စားပြီး ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်ချင်တဲ့ ဂျပန်လုပ်ငန်းရှင် တွေ အမေရိကားလုပ်ငန်းရှင် တွေ ဝင်လာနိုင်အောင်လမ်းဖွင့် ဆောင်ရွက်ပေးတာလည်း ဖြစ် တယ်။ အခု promote လုပ်နေ တာတော့ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍမှာ အများအပြားလာဖို့ ဒါကိုဝန် ကြီးက ဦးစားပေးပြီး ဖိတ်ခေါ်နေ တာပါ}}ဟု ပြောသည်။
ယင်းဖိုရမ်သို့ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်၊ ပြည်ထောင်စုဝန် ကြီးများဖြစ်ကြသည့် ဦးကျော်တင့် ဆွေ၊ ဦးမင်းသူ၊ ဦးသောင်းထွန်း နှင့်ဦးကျော်တင်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ ကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်း၊ ဌာနဆိုင်ရာများမှ ကိုယ်စားလှယ် များ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန် သံအမတ်ကြီး၊ အမေရိကန်သံအ မတ်ကြီးနှင့် သံရုံးများမှကိုယ်စား လှယ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည် များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင် များအသင်းချုပ် (UMFCCI) မှ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ JICA နှင့် JETRO တို့မှကိုယ် စားလှယ်များ၊ ဂျပန်နှင့်အမေရိ ကန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် သတင်းမီဒီယာများ စုစုပေါင်း ၂၀ဝ ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သိ ရသည်။
ဗန်းမော်မြို့၌ နယ်မြေလုံခြုံရေးအတွက် တပ်မတော်သံချပ်ကာယာဉ်များနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ မြို့တွင်း၌ လှည့် ကင်းဆောင်ရွက်နေ
ကားမှတ်တိုင်များတွင် ဆိုင်ခန်းတည်ဆောက်ငှားရမ်းမည့် ရန်ကုန်စည်ပင်၏အစီအစဉ်ကို တိုင်းလွှတ်တော်အမတ် ကန့်ကွက်မည်
တာချီလိတ်မြို့ရှိ မင်းဓမ္မတောင်၌ မိုးအဆက်မပြတ် ရွာသွန်းမှုကြောင့် ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းဆော?
မာရှေယာနိုက အသင်းအတွက် အသက်ကြီးလွန်းကြောင်း တရုတ်ကလပ် ဆို
ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး ပူးပေါင်းကော်မတီ ဖွဲ့စည်းရန် လွှတ်တော် သဘောတူ ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ အချု
နေပြည်တော်ကောင်စီ စည်ပင်ဌာနမှူးနှစ်ဦးကို မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်သို့ တရားစွဲတ?
ချင်းတောင် ထောပတ်သီးများကို တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့ရန် မန္တလေး ဝယ်လက်များ ဈေးပြိုင် ဝယ်ယ??
ကမ်းနီးကမ်းဝေး ငါးဖမ်းရေယာဉ်များ ရာသီဥတုဆိုးရွားပါက လှိုင်းဒဏ်၊ လေဒဏ် ခိုလှုံနိုင်ရန် ပြည်န